အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၁) သန်းခန့် ရှိသည့်အနက် ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ထင်း၊ မီးသွေးလောင်စာအတွက် သစ? - Yangon Media Group
အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၁ သန်းခန့်ရှိသည့်အနက် ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လောင်စာအတွက် ထင်းနှင့်မီးသွေးကိုအသုံးပြုနေပြီး နေအိမ်အဆောက်အအုံများအတွက်လည်း သစ်နှင့်ဝါးကို အသုံးပြုနေသည့်အတွက် သစ်တောများကို မဖြစ်မနေမှီခိုနေရကြောင်း သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းက ပြော ကြားသည်။ မေ ၂၁ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ သစ်တောဦးစီးဌာန အင်ကြင်းခန်းမတွင် ပြုလုပ်သည့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိက သစ်တောစိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နှစ်တို၊ နှစ်ရှည်ချေးငွေရရှိရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာ တွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးအုန်းဝင်းက ”မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သစ်တောသယံဇာတများဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အရေးပါသလို ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး နဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့နည်းပပျောက်ရေးအတွက်လည်း အထူးအရေးပါလှ ပါတယ်။ စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာ ကျေးလက်ဒေသနေ ပြည်သူများဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်လူမှုစီးပွားရေးအတွက် သစ်တောများကို မှီခိုနေကြ ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၁ သန်းခန့်ရှိတဲ့အနက် ၈၁ ရာခိုင် နှုန်းဟာ လောင်စာအတွက် ထင်းနဲ့မီးသွေးကိုအသုံးပြုနေပြီး နေအိမ်အဆောက် အအုံများအတွက်လည်း သစ်နဲ့ဝါးကို အသုံးပြုနေလို့ သစ်တောများကို မဖြစ် မနေမှီခိုနေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိမျိုးဆက်ရဲ့လိုအပ် ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့သာမက နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် သစ်တောသယံဇာတ လိုအပ်ချက်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ မြန်မာ့သစ်တောများကို စနစ်တကျစီမံအုပ်ချုပ်သွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏သစ်တောသယံဇာများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ ချဲ့ ထွင်ခြင်း၊ မြို့ပြများဖွံ့ဖြိုးတိုးချဲ့လာခြင်း၊ သစ်အလွန်အကျွံထုတ်ခြင်း၊ တရား မဝင်သစ်ထုတ်ခြင်းစသည့်အချက်များကြောင့် လျော့နည်းကျဆင်းလျက်ရှိပြီး FAO ၏ သစ်တောသယံဇာတဆန်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာ(FRA 2015)အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုသည် နိုင်ငံဧရိယာ၏ ၄၂ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင် နှုန်းရှိပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်နှင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အကြား နှစ်စဉ်သစ်တောပြုန်းတီးမှုသည် ၁ ဒသမ ၇၂ ရာခိုင်နှုန်းထိရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဦးအုန်းဝင်းက”ဒီလိုသစ်တောပြုန်းတီးမှုနဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဘေးအန္တရာယ်များ၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များကို ရင် ဆိုင်တွေ့ကြုံရလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် များကို ထိခိုက်နှောင့်နှေးစေပါတယ်”ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတော်၏မူဝါဒနှင့်အညီ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း ကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ သစ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရေးစသည့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်းလုပ်ငန်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးတွန်းအားပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအတွက် မည်သည့်အဖြေထွက်သည်ဖြစ်စေ နှစ်နိုင်ငံ အမြဲတမ်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေ
သံလွင်မြစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ရန်ပွဲကြောင့် တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေ
အက်ဖ်အေဖလား ပဉ္စမအဆင့်ပွဲစဉ်တွင် ချဲလ်ဆီးနှင့်တွေ့ဆုံသဖြင့် မန်ယူအသင်း ပွဲကျပ်နေ
တရုတ် သွင်းကုန်များကို အခွန် ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသို့ တိုးမြှင့်မည်ဟု ထရန့်ြ??